Wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya oo dhigiisa Turkiga kula kulmay
July 11, 2013 4:57 am18 commentsViews: 11
C/kariin Xuseen Guuleed wasiirka arimaha gudaha iyo amaanka Qaranka ayaa magaalada Ankara wuxuu kula kulmay dhigiisa Muammer Güler,iyagoona kawada hadlay arimaha Soomaaliya.
Yuusuf Axmed Xasan (Jeego) oo ka tirsan mas’uuliyiinta safaaradda Soomaalida ee dalka Turkey ayaa Saxaafada u sheegay in labada wasiir ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo adkeynta wada-hadallada u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Soomaaliland.
C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sidoo kale garoonka diyaaradaha Ankara wuxuu kula kulmay wasiirka Waxbarashada Turkiga,waxayna ka arinsadeen xaalada waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed ee halkaasi wax ku barta.
July 16, 2013336
July 16, 20139
July 16, 201342
Shidaal laga Baaro Soomaaliya oo Dagal Sababi Karo Warbixin QM ay So saartay. 692 views
Haweeney xubinta taranka ka jartay ninkeeda(La yaabka dunida) 420 views
Maamulka Jubaland ee Axmed Madoobe oo dowlada ka codsatay in ay iska bariyeesho Col. Barre Hiiraale 277 views
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo amaanay howlgalka Kenya ee Jubooyinka 222 views
Axkaamta Soonka Q: 7aad W/Q: Sh Calinuur Xoogsade 197 views